Iindaba-Ngaba iyakuba lihashe elimnyama leeMbasa ze-SDJ zalo nyaka?
Kwinyanga ephelileyo, i-SDJ yonyaka ibhengeze uluhlu lwabagqatswa. Kule mihla, amabhaso e-SDJ abe zinevali yomdlalo webhodi. Abantu abaninzi bagweba umgangatho womdlalo ukubona ukuba iphumelele amabhaso omdlalo webhodi eyahlukeneyo, ndingasathethi ke ngomdlalo we-SDJ owawukhethwe ngononophelo ngabadlali baseJamani.
Ukutyunjwa kweBhaso le-SDJ kulo nyaka kubandakanya IiAdventures zikaRobin Hood, Idolophu encinci: iSekela lesiXeko (iyafumaneka e-China) kunye UZombie Teenz Evoluton.
Iikhrayitheriya zeBhaso le-SDJ: Umdlalo wokutyumba kufuneka ube ngokonwaba kwaye abaphulaphuli babanzi. Kulo nyaka, ilizwi-lomlomoItyala Elikhulu kwiDolophu encinciiyadubula. Ndiyazibuza ukuba ingaba ingaphumelela na i-SDJ?
Ukutyunjwa kwe-Kinderspiel des Jahres Award Mia London, UDragomino (uguqulelo lwabantwana lwe Ubukumkani baseDominino) kunye Ababali bebali.
Ibhaso leKennerspiel des Jahres lokuba abadlali bebhodi yomdlalo abakhathalele kakhulu malunga nokuzalwa phakathi I-Stone Age 2.0: Iintlanga zokuqala (IPaleo), Amanxuwa alahlekileyo ka-Arnak kwaye Iimpawu zeNdawo(Iimpawu zeNdalo). Imidlalo emibini yokugqibela inokuthengwa e-China.
Malunga Ubudala bamatye 2.0, sayazisa kwinqaku lonyaka ophelileyo. I-SDJ kule minyaka mibini idlulileyo iye yadideka ngakumbi, ngakumbi imbasa yeKennerspiel des Jahres. Ndiva ukuba isicwangciso kunye nobunzima buhlile. Kodwa namhlanje siza kuthetha ngomdlalo ofana nobuntshatsheliUmkile, Amanxuwa alahlekileyo ka-Arnak.
Ukusukela ekukhululweni kwayo, yayixhonyiwe kuluhlu olushushu lwe-BGG, kwaye bendihlala ndinomdla kakhulu ngemvelaphi yayo.
Jonga indawo engaziwayo
Amabhodlo alahlekileyo ka-Anakngumdlalo ohlekisayo kunye nomdlalo we-adventure. Abadlali baya kusebenza njengamalungu eqela lekhenketho kwaye baphonononge iindawo zamandulo nezingaqhelekanga xa behamba:Amanxuwa eArnak. Ngokwendlela yokusebenza, lo ngumdlalo odibanisa i-DBG (ukwakha amakhadi) + nokubekwa kwabasebenzi.
Abaqulunqi bomdlalo Mín kwaye UElwensisibini. Ngaphambi kokuba babe ngabaqulunqi, basebenze njengabavavanyi bezemidlalo ixesha elide. Esi sikhundla sikwabonelela ngoncedo oluninzi, ukuze babenokuqonda okungcono oomatshini abaphambili bomdlalo kunye nokukhethwa ngabadlali.
I-DBG + ngomdlalo wokubekwa kwabasebenzi ayikho kakhulu okanye incinci kakhulu, kodwa UArnakKungcono ekuhlengahlengiseni indlela yomdlalo kunye nokucaca kwenkqubo. Ekuqaleni komdlalo, umdlali ngamnye uya kuqala ngamakhadi amathandathu esandleni, oko kukuthi: iidola ezimbini, iikhampasi ezimbini, kunye namakhadi amabini oyika. Umdlali wokuqala unenzuzo, kwaye umdlali wesibini unezinto anazo.
Kumjikelo ngamnye, umdlali angakhetha enye yezi zenzo zisixhenxe zilandelayo: Okokuqala, ungakhetha ① ukukhupha umsebenzi kwindawo eyaziwayo ② ukuvula isikhululo esitsha. Umdlali ngamnye unabasebenzi ababini kuphela, ke babasebenzise ngononophelo.
Emva kwexesha, xa uvula isikhululo esitsha, unokwenza isenzo sokubulala izilo. Ngeli xesha, ungene kule ndawo ukuze uhlolisiseArnak. Ezi ndawo zifihliweyo zigcinwe cwaka ziingcwele zabaxhasi.
Ungahlawula izixhobo ezihambelana nokulwa nezilo, kwaye uvuyele amanqaku amahlanu kunye nezixhobo zothixo ongumgcini. Ewe unokukhetha ukungalwi nezilo, uya kufumana ikhadi loloyiko kunye nezihlangu. Nantsi enye indlela eqhelekileyo esetyenziswa yi-DBG: ukunciphisa amanqaku ekupheleni komdlalo, ilayibrari yamakhadi amdaka.
Ke, ukuba usenemali (okanye ugcine imali), ungenza isenzo samakhadi okuthenga kunye namakhadi okudlala. Ikhadi elihlaza okwesibhakabhaka likhadi le-artifact, kufuneka uhlawule ngekhampasi, kwaye unokusebenza kwangoko emva kokuthenga. Ikhadi elimdaka likhadi lezixhobo, elimele izixhobo okanye abathwali abanokusetyenziswa kuhambo.
Okokugqibela, kukho enye indlela ebalulekileyo kumdlalo: Ukunyuka kwengoma. Kukho iintlobo ezintathu zemibhalo: igolide, isilivere kunye nobhedu. Kwinkqubo yokunyuka komkhondo, uya kuvuzwa nangumncedisi. Intshukumo yokugqibela onokuyikhetha yi assPass.
Xa imijikelo emihlanu igqityiwe, umdlalo uphelile. Umdlali onamanqaku amaninzi uyaphumelela.
Amanqaku omdlalo ewonke = amanqaku amanqaku +
Njengomdlalo wokubekwa kwabasebenzi kwi-DBG +, ngaba umyili uyidibanisa njani le mibini? Mínusinike impendulo. Kwintshukumo, kufuneka sisombulule ingxaki ephambili: kumdlalo wokubekwa kwabasebenzi, ukhetha isenzo kumjikelo; kodwa kumdlalo we-DBG, udlala combo ngokudityaniswa kwamakhadi, anefuthe lokungena.
Nangona kunjalo, kumdlalo wethu, asinakho ukuvumela umdlali ukuba abe nesandla esipheleleyo samakhadi, kodwa sinokwenza kuphela isenzo sokubeka abasebenzi; kwelinye icala, asinakuvumela umdlali adlale onke amakhadi kwaye abeke bonke abasebenzi. Le ngongoma efuna ukulinganiswa. Ke ngoko, sithathe isigqibo sokuba "sidibanise" isenzo: Abadlali banokwenza isenzo esinye kumjikelo ngamnye, kwaye banokudlala ikhadi ngokusekwe kwisiphumo, okanye banokukhetha ukuya kwindawo entsha "kwinzululwazi yezinto zakudala". "
Nangona iphumelele kuphela i-2020 yeGolide yeGeek yokuchongwa kwezobugcisa, ubugcisa buka-Anak abuphulukani nemidlalo emininzi ephumeleleyo kwaphela. Apha, okubonayo lihlabathi elihle, kwaye ayisiyiyo le DBG elula okanye umdlalo wezezemveliso.
Xa kuthelekiswa nomdlalo otyunjiweyo weKennerspiel des Jahres Award kulo nyaka, isitayile sobugcisa UArnakkokona kwahlukileyo. Umzobi womdlalo (UMilan Vavroň) uzobe nemifanekiso ye Umlingo Knight kwaye Ngo-1824: I-Austro-Hungarian Railway.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, iihieroglyphs kwimibhalo ethengwe ngabadlali kumdlalo zonke zadalwa ngu Mín.
Ekuqaleni, MínNdibe nencoko ende kunye neqela lobugcisa. Baxoxa ngezimvo zabo baxoxa ngokubonakala kwesiqithi kunye nabantu ababekhe bahlala e-Anaque: indlela yabo yokuphila, iinkolelo kunye namabali abawabonisileyo.
Nini UOndřej Hrdina waqala ukwenza imizobo, Mín Waqala ukuqamba ibali elibizwa Imbali ka-Anaquekunye nokucinga ngeembono ngemifanekiso. Emva kokwenza isikhokelo, konke okuseleyo kukugcwalisa iinkcukacha. Sichaza iJografi, imozulu, iintyatyambo kunye nezilwanyana zaseArnak Island kunye nendlela yabantu yokuphila…
Iintsomi kunye nenkolo ziyinxalenye ebalulekileyo yenkcubeko, kwaye ungabona kwimisebenzi yobugcisa abayishiyileyo: izinto zenkcubeko, indawo kunye namabali aboniswe eludongeni.
Ngokubanzi, ndiwuthanda kakhulu lo mdlalo. Njengabaqulunqi abancinci,Mín kwaye UElwenkhange ayile nje "indlela ezimbini" zomdlalo wesilo suture, kodwa wakha imvelaphi engaphezulu (inqanaba eliphezulu lokugqibelela), ukudibanisa iingenelo ze-DBG kunye nokukhululwa kwemizi-mveliso, uyilo lucacile, inkqubo yomdlalo ayinzima, imigaqo ziqhelekileyo kwaye azikho nzima, kwaye indlela nganye inamabala aqaqambileyo. Ngokwenyani lo ngumdlalo webhodi ophumelele amabhaso.
I-2021 SDJ iya kubhengezwa nge-19 kaJulayi. Ngaba unakoUArnak, ophumelele amagama amane kunye nendebe evela kwiGolide yeGeek, uphumelele eli dabi?
Isihloko esisebenzisanayo: Ucinga ukuba ngubani oza kuphumelela iMbasa yeKennerspiel des Jahres kulo nyaka?
Idayisi yesiNtu, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Amalaphu Umdlalo weBhodi, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Ikhadi lemikhono, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni,